Maitiro Eku Backup iPhone KuICloud Pane iOS 12: Iyo Inokurumidza Nhungamiro! - Iphone
sei foni yangu isiri kufona
restart iphone 4 isina simba bhatani
ndinobatanidza sei iphone yangu kune internet
Maitiro Eku Backup iPhone KuICloud Pane iOS 12: Iyo Inokurumidza Nhungamiro!
Unoda kusevha negadziriro yeparutivi ose mashoko pamusoro iPhone wako, asi hauna chokwadi sei. Pasina backup, iwe unomhanya mungozi yekurasikirwa neruzivo rwese pane yako iPhone. Muchikamu chino, ndichakuratidza maitiro ekuchengetedza yako iPhone kuICloud pane iOS 12 !
Maitiro Eku Backup iPhone KuICloud Pane iOS 12
Kuti uchengetedze iPhone yako kuICloud pane iOS 12, tanga nekuvhura Zvirongwa uye tepa pazita rako kumusoro kwechiso. Wobva wadzvanya iCloud .
zvinorevei kana ruoko rwako rweruboshwe ruchiruma
Tevere, pfuurira pasi uye tapira on iCloud negadziriro yeparutivi . Ita shuwa switch iri padhuze ne iCloud negadziriro yeparutivi yakavhurwa.
Pakupedzisira, tapira Dzokera Kumusoro Izvozvi .
Ini Handina Zvakaringana Kuchengetedza Ku Backup KuICloud!
Kana yako iPhone isina yakakwana iCloud yekuchengetedza nzvimbo yeku backup kuICloud, une sarudzo mbiri:
hapana sim message pane iphone
Tenga yekuwedzera iCloud yekuchengetedza nzvimbo.
Gadzira nzvimbo yekuchengetera nekubvisa zvimwe zvezvinhu zvakatotsigirwa kuICloud.
Kana iwe uri kufunga kutenga yakawedzera iCloud yekuchengetedza nzvimbo, tarisa chinyorwa chedu pane nzira dzeku tenderera uchibhadharira iCloud backups . Iwe uchiri kukwanisa kusevha yako iPhone kuICloud pane iOS 12 pasina kushandisa dime!
Kana iwe uchida kungo bvisa imwe nzvimbo yekuchengetera iCloud, unogona kuzviita nekuenda ku Zvirongwa -> Zita Rako -> iCloud -> Manage Kuchengeta .
Wobva wadzvanya pachinhu chaungade kubvisa iCloud chengetedzo. Pakupedzisira, tapira Dzima uye Bvisa .
zvinorevei zombie zviroto
Ongorora: Kana iwe ukafunga kubvisa maMessage kana Mapikicha, uchave nemazuva makumi matatu ekuchinja pfungwa dzako. Mushure meizvozvo, ese mafoto uye mameseji akachengetwa muICloud anozobviswa zvachose.
Paunenge iwe wabvisa zvakakwana nzvimbo yekuchengetera, dzokera kuZvirongwa -> Zita Rako -> iCloud -> iCloud Backup uye tap Dzokera Kumusoro Izvozvi .
chirimwa chinochengeta nyoka
Yakatsigirwa Uye Yakagadzirira Kuenda!
Iwe wakabudirira kutsigira yako iPhone, saka pane yakachengetedzwa kambani yedata rako rese kana paine emergency. Ita shuwa iwe unogovana ichi chinyorwa pasocial kubatsira mhuri yako uye shamwari kuchengetedza yavo iPhone kuICloud pane iOS 12! Kana uine chero mimwe mibvunzo nezveICloud kana yako iPhone, vasiye pazasi.
Ongorora: iOS 12 parizvino iri muchikamu chayo cheveruzhinji beta. Iyi iOS yekuvandudza ichave yakaburitswa zvizere kuruzhinji imwe nguva muna Kuwa 2018.